दलित र संघीय गणतन्त्र
Dalits in Nepal
It is my great pleasure to join you for the occasion of the greatest demonstration for the emancipation from racial discrimination in the history of our country.
Four and half decades ago,aking of Nepal announced ‘Civil Codes’ to end the racial discrimination prevailed in the society from the ages, established by the orthodox Hinduism. This momentous decree came asahope of millions of so-called Depressed people who had been oppressed in the name of caste and had been seared in the flame of withering justice...
संघीय गणतन्त्रलाई हामीले स्वीकार गरिसकेका छौ तर दलितका लागि के संघीय गणतन्त्र उचित व्यवस्था वन्न सक्छ - सकिदैन किनभने नेपालका दलितहरु छरिएर रहेको अवस्थामा छन् । अछुत हुनु वाहेक दलितको खास आफ्नो पहिचान छैन । यसकारण दलितलाई विषेसाधिकारका रुपमा दलित जनसख्याका आधारमा राज्यलाई नै सिङ्गो एउटा गण मानेर सहभागितामा पर्ुण्ा समानुपतिक व्यस्था अपनाउन सकिन्छ । हुन सक्छ राज्यलाई प्रदेशका रुपमा कोशी प्रदेश, गण्डक प्रदेश र कर्ण्ााली प्रदेशका रुपमा संघीय गणतन्त्रमा विभानजन गर्न सकिन्छ । यदि जातिय आधारमा संघ वनाउने हो भने जनसख्याको आठौ र वाह्रौ पोजिशनमा नेपालका कामी र दमाई छन् तिनका लागि कुन प्रदेश - आम दलितको पोजिशन त तेस्रो छ । नेवा राज्य वन्न सक्छ भने नेवारको भन्दा वढि जनसख्या भएको दलित समुदायको मध्ये एउटा कामीको गणराज्य हुनेकि नहुने - यो न्यायोचित वहसका लागि आँखा खोल्न छोडि दिउँ । जे होस् नेपाली दलितका लागि न्योचित व्यवस्था हुन जरुरी छ ।
देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । यसले दलितलाई खासै फरक पारेन किनभने दलित सवै भाषा र धर्मवाट शोषित छ । तामाङको वाहुल्यता भएको ठाउमा तमाङकै भाषा र धर्मवाट प्रभावित छ । गुरुङकोमा गुरुङकै । शर्ेपाकोमा शर्ेपाकै । र्राईकोमा र्राईकै । वाहुन क्षत्रीकोमा वाहुन क्षैत्रीकै । तर्राईका दलितहरुले दशै भन्दा छट नै धुमधामका साथ मनाउछन् । देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण गरियो । यो सकरात्मक पक्ष हो । तर व्यवहारमा उत्रन सकिरहेको छैन । यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न अव वन्ने संविधानमा विषेश व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यहि वहसमा आज हामी जुटिरहेका छौ । आरक्षण भन्ने शब्द सुन्नै नचहानेले आरक्षणलाइ संरक्षण भन्ने बुझे हुन्छ । संरक्षण भन्ने शब्द सुन्नै नचहानेले संरक्षणलाई कोटा प्रणाली भन्ने बुझे हुन्छ । कोटा प्रणाली भन्ने शब्द सुन्नै नचहानेले कोटा प्रणालीलाई समानुपातिक प्रणालीको समावेशी सिद्घान्त भन्ने बुझे हुन्छ । समानुपातिक प्रणालीको समावेशी सिद्घान्त भन्ने शब्द सुन्नै नचहानेले चुक्ता गर्नु पर्ने विषेशाधिकार भन्ने वुझे हुन्छ । राष्ट्र र एउटा समाजले विधिवत गरेको गल्तिको चुक्ता हुनै पर्छ । तर अहिले सम्मको बुझाईले के भन्छ भने नेपाली दलित कृपा शक्तिका कृपापात्र मात्र वनिरहेका छन् । अधिकार पाएका छैनन् । अधिकार र चुक्ता अववन्ने संविधानमा सुरक्षित हुनर्ुपर्छ ।
Recent Activities :
निर्वाचन नगर्न वैद्यको बहाना
प्रजातान्त्रिक समाजवाद मेरो आँख
जनता, नेता र दर्शनको दरिद्रता
Recent Videos :
Copyright © 2018. www.mitharam.com.np. All Right Reserved.